हेलिकप्टर चढेर भोट माग्दै एनआरएनएहरु — News of The World
हेलिकप्टर चढेर भोट माग्दै एनआरएनएहरु
डिल्ली राम अम्माईआश्विन २३, २०७४
सबै गुटबन्दी र चलखेललाइ हेर्दा त्यहाँ योजना, लगाब,पारदर्शिता भएको र नेपाली डायस्पोराका मजदुर प्रतिको समबेदना भएको नेता पुग्ने सम्भाबना न्युन देखिन्छ । यो यदि मात्र आर्थिक हैसियत राख्नेहरुकै फेरोमा घुम्नु पर्ने हो भने धनिहरुको रमिता देखाउने क्लब श्रमजीबी डायस्पोराका मजदुरहरुलाई किन चाहियो ? हामी भाग्यले प्रवाशिको जिबन जिउन बाध्य भएपनि नोकरशाहहरुको रमाइलोको साधन बन्न जरुरी छैन ।
बेल्जियम हेलिकप्टरको बेगसंगै हुइकिदै आकाशमा सुसेली हालेर भोट माग्दैछन एनआरएनएका नब धनाड्य अभियन्ताहरु । उनीहरुलाई थाहा छैन, त्यो आकाश भन्दा तल तिनीहरुकै कति आफन्त, छिमेकी र इष्टमित्रका छोरी बुहारी त्यहि साधन नभएर सुत्केरी ब्याथाले प्राण त्याग्दै गरेका होलान । उपचार नपाएर वा अस्पताल लैजाने साधन नपाएर अथवा उपचार गर्ने पैसा र पहुच नभएर उनीहरुले प्राण त्यागि सकेका पनि हुन सक्छन । तर ,एनआरएन नेता , हामीले भोट हाल्न अधिवेशन कुरेर बसेका नेता, संसार भर छरिएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका वा बनाइएका मजदुरहरुका नेता, संसारको सबै भन्दा गरिब देशका गरिब जनताका छोराछोरीहरुको आशु पुछ्न र उनीहरुको उत्थान गर्न कम्मर कसेर लागेका नेताको हेलिकप्टर रयाली देख्दा लाग्छ अब हाम्रो र उनीहरुको बिच सम्झने नमिल्ने खाडल परि सकेको छ ।
उनीहरुको हामि प्रतिको समबेदना मरी सकेको छ । गाउघरको दुख र पीडाको त कुरै छोडौ , हाम्रो परदेशको पिडा र दुखसंग उनीहरुको रत्तिभर मतलब छैन । यो फोरम त खालि उनीहरुको मनोरंजन, हेलिकप्टर सयर र कथित पुजीपतिको खानदानिया रवाफ देखाउने मंच मात्र हो । उनीहरुमा समबेदना ज्युदो भए अध्यक्ष पुगे हुने कार्यक्रममा हेलिकप्टरको रयाली लगेर गाउँ तर्साउने गरि हेलिकप्टर बर्साउन के जरुरि थियो ? खालि भोट माग्न मात्र हैन ? शेष घले पुगे पछि हामी पुग्नै पर्छ भनेर डाहले मर्ने र “हामि पनि घले जत्तिकै हौ” भन्नलाई मात्र किन बर्साएका होलान म्याग्दीको त्यो गाउमा हेलिकप्टर ? फेरी अति जरुरि काम बाहेक देखाउनकै लागि हेलिकप्टरमा सयर गरेर गरिब जनताको खरको छानो उडाउनेलाई डायस्पोराका सम्पूर्ण श्रमिकहरुले बहिस्कार गरेर , भोटमा लोप्पा ख्वाइदिए भने यिनले के गर्लान ?
हाम्रो मुलुक केहि राज्यसंग सम्बन्धित आवस्यक र अति जरुरि उपचार प्रक्रिया वा उद्वार बाहेक खालि खादा र माला भिर्न मात्र हेलिकप्टर उडाउन सक्ने हैसियतमा पुगेको छैन । सक्छौ तिमीहरुले त्यो विलासमा खर्च गर्ने रकमको थोरै भाग दुर्गमका जनताको उपचार सम्बन्धि उद्वारमा देउ । तिमीले खेल्ने क्यासिनो र हरियो लेबल रक्सीको थोरै भाग सुत्केरी हुन नसकेर प्राण त्याग्न लागेकी तिम्रै आफ्नो छिमेकी दिदीको उद्वारमा लगाउ । तिमीले आफैले टिकट किनिदिएर ओसारिएका कथित तिम्रा दासहरुको भरण पोषण खर्च कटौती गरेर ति दुखले थिलो थिलो पारिएका एक छाक खान पनि धौ -धौ तिम्रा मामा फुपुका र मित बाका र उनका सन्ततिहरुको उद्वार र भबितब्यमा सहारा बन । तिमीलाई तिम्रो आची सोहर्ने र तिम्रो बान्ता अन्जुलिमा थाप्न तिमीले आफै टिकट काटी दिएर लागेका ति बिकाउ पत्रकारको पनि आवस्यकता पर्दैन र दासहरुको पनि आवस्यकता पर्दैन । तिमीहरुको बिज्ञापन मजदुर आफैले गर्छन । यदि तिमीले मनैबाट डायस्पोराका उत्पीडित मजदुर, खाडीका बेसहारा दिदि बैनी र मलेशियाका आफन्तहरुको थोरै पनि सहारा बन्न सक्यौ भने । सुन आफ्नै सामर्थ्यले टल्किञ्छ तर जलप केहीबेर पछि खुइलिएर जान्छ । तिमीले गरेका सबै राम्रा नराम्रा कामबारे आफ्नो श्रम बेच्नेले भोट हाल्ने बेलामा पक्कै एकपटक सोच्छ । उसको उठ, बस, रहन सहन, हाउभाउले नै थाहा हुन्छ कि यी उमेद्वार श्रमिक मैत्री छन् वा छैनन् । दुखका दिनमा कसले कुन नियतले के भनेर हेप्छ, त्यो पनि हेक्का राखेको हुन्छ मजदुरले । “
एकजना लन्डनबाट आएको साथीले भन्दै थिए , ….उनको बारेमा तिम्रो के भनाइ छ? मलाइ थाहा छैन तर मेरो त कुरो स्पष्ट छ , मैले मुखले नाइँ नभने पनि उनलाई भोट दिन्न, उनले हामी परिवार सहित पैदल हिडेको बेलामा चिल्लो गाडी ल्याएर हाम्रो नजिक रोक्छन र नमस्कार पनि नभनी हर्न बजाएर कुद्छन । म भर्खर आएको उनकै फुपुको छोरा, तर कहासम्म हो म पुर्याइदिञ्छु सम्म भन्दैनन । उनको त्यो रवाफले मलाइ घोचेको छ दाइ !” सम्मान खोजेर मात्र पाइने बस्तु हैन, सम्मान र भावनात्मक सम्बन्ध आत्माले दिने स्वीकृति पत्र हो जुन कुरा अरुको सहारा बनेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, कर्मको समानता र समबेदनाको साथि बनेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भन्नेले भानिदेलान, त्यो उनीहरुको निजि कुरा हो , उनीहरुको ब्याक्तिगत सम्पत्ति खर्चेर उदाएका हेलिकप्टर हुन् , क्यासिनोको मजा उनीहरुको ब्याक्तिगत धन खर्चेर लिइएको हो , महंगा रक्सि उनीहरुले आफै किनेका हुन् । तर हैन, उनीहरु अब ब्याक्तिगत जिबनबाट निस्केर हामी सामाजिक जिबनहरुको नेतृत्व गर्छौ,डायस्पोराका सबै नेपालीको नेता बन्छौ, हाम्रो जिबनको धेरै अंस सामुहिक हितको संरक्षणमा बिताउछौ भनेर आइसकेपछि उनीहरुका आचरण, बोलि, ब्याबहार र सामाजिक गतिबिधिहरुले ब्याक्तिगत प्रबाहबाट उन्मुक्ति पाई सकेको हुन्छ । उनीहरुका आचरण तुरुन्तै सामाजिक प्रवाहका अंस बनिसकेका हुन्छन । लोकले उनीहरुको आफ्नै तरिकाले मुल्यांकन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरु स्वयंले बुझ्ने कुरा हो ।
यसबाट के बुझिन्छ भने अबको एनआरएनएहरुले पनि पहिले जस्तै हेलिकप्टर चढाउन सक्ने हैसियत भएका महाजनहरुकै खैजडी बजाउदै हिडाउनु पर्ने देखिएको छ । सबै गुटबन्दी र चलखेललाइ हेर्दा त्यहाँ योजना, लगाब,पारदर्शिता भएको र नेपाली डायस्पोराका मजदुर प्रतिको समबेदना भएको नेता पुग्ने सम्भाबना न्युन देखिन्छ । यो यदि मात्र आर्थिक हैसियत राख्नेहरुकै फेरोमा घुम्नु पर्ने हो भने धनिहरुको रमिता देखाउने क्लब श्रमजीबी डायस्पोराका मजदुरहरुलाई किन चाहियो ? हामी भाग्यले प्रवाशिको जिबन जिउन बाध्य भएपनि नोकरशाहहरुको रमाइलोको साधन बन्न जरुरी छैन ।
यदि तिमीले मनैबाट डायस्पोराका उत्पीडित मजदुर, खाडीका बेसहारा दिदी बहिनी र मलेशियाका आफन्तहरुको थोरै पनि सहारा बन्न सक्यौ भने दुनियाले जयजयकार गर्छ र खोजी–खोजी संस्थाको सदस्य बन्नेछन् ।